Uluhlu lweendawo zokukhuphela simahla ii-ebooks ngokusemthethweni | Zonke iReaders
Iincwadi ze-e ezitshiphu
Uluhlu lweendawo zokukhuphela simahla iincwadi ngokusemthethweni
UNacho Morató | | eBooks
1 Ngaba ujonga umntu ofunda ukuvalelwa?
1.0.0.1 Uhlobo lweWebhuwwhite
1.0.0.2 UKobo Clara HD
2 Iindawo ezingenzi nzuzo zokukhuphela iincwadi zeencwadi
2.1 Iiprojekthi ezinkulu
2.2 Iiprojekthi zobuqu
2.3 Ezinye iisayithi zokukhuphela ii-eBooks
3 Iiprojekthi zentengiso ezinee-ebook zasimahla
4 IiSayithi zokukhuphela ii-ebook zobugcisa
Ngaba ujonga umntu ofunda ukuvalelwa?
Abantu abaninzi bayasibuza ukuba yeyiphi i-ereader enokuthengwa ukwenza ukuvalelwa kube mnandi ngakumbi. Ukuba awufuni ukuya ngqo kwinqanaba, sicebisa 2.
Esona sithengisi sithengisa kakhulu kwintengiso. Imalunga nomfundi weAmazon
UKobo Clara HD
Kubathandi bemigangatho kunye nomgangatho
Ngolu manyano sizimisele ukubonelela ngoluhlu oluhlaziyiweyo lwe iisayithi zokukhuphela ii-ebook simahla nasemthethweni. Ingcinga yethu kukuhlaziya uluhlu ngokuthe rhoqo ngokongeza iisayithi ezintsha okanye ukususa ezo zingasasebenzi. Khumbula ukuba ziya kuhlala ziyiprojekthi enikezela umxholo ngokusemthethweni.
Sizama ukwahlula iisayithi ukuze zikhululeke kangangoko ukuze uzisebenzise. Kubazali sibonisa iilwimi zeencwadi onokuthi uzifumane kwiqonga ngalinye. (ES) Spanish, (En) IsiNgesi kunye (IPHAKATHI) NgeSpanish nangesiNgesi. Iindaba okoko uhlaziyo lokugqibela luvela kunye Imvelaphi eluhlaza.
Uluhlu lwethu luye 63 imithombo enezigidi zeencwadi ezifumaneka ngazo zonke iilwimi.
Iindawo ezingenzi nzuzo zokukhuphela iincwadi zeencwadi
Kweli candelo siza kubonisa iziza ezingenzi nzuzo apho khuphela iincwadi Zonke iintlobo ezivela kwiiklasikhi, ukuya kwizincoko, ngeenoveli okanye kwiincwadi zabantwana.
Iiprojekthi ngokubanzi kunye nemisebenzi yakudala ekummandla woluntu. UGutenberg ugqame ngaphezu kwayo yonke into, ngokuba yeyona ibanzi kwaye kuba isinika iincwadana kwi .epub nakwi .mobi.
Iprojekthi yeGennberg (IPHAKATHI) Iklasikhi phakathi kweklasikhi xa kufikwa kwiiprojekthi ezibonelela ngemisebenzi yasimahla. Olona londolozo lukhulu lweencwadi zommandla woluntu emhlabeni.
Archive.org (IPHAKATHI) Olunye ugcino lwezigidi zeencwadi zedomain zoluntu ezigciniweyo. Inika i-pdf.
- Ithala leencwadi elivulekileyo (IPHAKATHI) Iprojekthi yoVimba ye-Intanethi ejolise ekwenzeni iphepha lewebhu kuyo yonke incwadi ekhoyo. Nangona ingavumeli ukukhutshelwa kwiithebhu okanye kumaphepha eencwadi, inxibelelana neGutenberg, Archive okanye umthombo apho ifumaneka khona ukuba ikwindawo yoluntu.
Wikisource ngeSpanish kwaye ukuba ufuna iincwadi ngolunye ulwimi Wikisource. Ilayibrari ekwi-intanethi yemibhalo yentsusa kwindawo kawonkewonke okanye phantsi kwelayisensi.I-GFDL yiprojekthi yeWikimedia evumela ukukhutshelwa kwi-pdf.
Ii-Wikibooks (ES) Enye iprojekthi ye-Wikimedia ejolise ekwenzeni iincwadi zezifundo, iincwadana zemigaqo, iityhuthoriyali okanye ezinye iitekisi zemfundo ezinomxholo wasimahla kunye nokufikelela simahla kuye nawuphi na umntu.
iBiblio (En) Ithala leencwadi elikhulu kunye nogcino lwedijithali.
Ilayibrari yasespanish yedijithali (ES) Indawo yasimahla kunye nesimahla yeencwadi ezigciniweyo ezigcinwe kwithala leencwadi lesizwe.
IMiguel de Cervantes iThala leeNcwadi elililo (ES) Ingqokelela ebonakalayo yemisebenzi yakudala kwiilwimi zaseSpanishi.
Uthungelwano lukaMasipala lwamathala eencwadi aseSeville (ES) Ikhathalogu yedijithali yenethiwekhi kamasipala yethala leencwadi laseSeville.
Europeana (IPHAKATHI) Yindawo yokufikelela kumawaka ezixhobo zedijithali eYurophu.
KwiYunivesithi yaseAdelaide (En) Ilayibrari ekwi-Intanethi yeYunivesithi yaseAdelaide e-Australia, isivumela ukuba sifunde kwi-Intanethi, okanye sikhuphele imisebenzi kwiifomathi ezahlukeneyo.
UKobo Clara HD uphononongo
Iiprojekthi ezincinci ezingenzi nzuzo.
Irhanisi kunye neOctopus (ES) Elinye lamanyathelo okungenzi nzuzo kunye nomgangatho ophezulu kupapasho lwayo. IGanso y Pulpo yiprojekthi yokushicilela ezimeleyo engenzi nzuzo efuna ukuphinda ikhuphe isicatshulwa ekunzima ukufikelela kuso okanye ukulibala kwaye esele inamalungelo.
Iimbali zeAlgernon (ES) Inyathelo elihle kakhulu elipapasha ipapasho elingashicilelwanga, isayensi kunye namabali ayoyikisayo ngeSpanish. Enye iprojekthi engenzi nzuzo esisizisela amabali kubabhali abaphambili abangazange bapapashwe ngeSpanish. Ophumelele i-Ignotus 2013, ukuba uyayithanda intsomi yesayensi kunyanzelekile.
Iintlelo zeCruciform (ES) Indlu encinci yokupapasha engenzi nzuzo, ephumelele i-Ignotus ngo-2013, isinika ii-ebook zasimahla kunye nabanye nohlelo olunomda oluthi, lwakuba lugqityiwe, lube yindawo yoluntu.
Ukukhempisha iNcwadi (ES) Zichazwa njengelayibrari yokusebenzisana yedijithali. Bazinikele ekusebenzeni ngokudibanisa kunye neelayisensi ezivulekileyo. Inxibelelana kakhulu nezixhobo kwimicimbi yezopolitiko, yezentlalo kunye nonxibelelwano.
Qomun (IPHAKATHI) Isikhokelo kunye neqonga lokuhambisa inkcubeko simahla.
1 incwadi 1 € (ES) Iprojekthi kuphela kulo lonke uluhlu olungaziniki iincwadi zamahhala, kodwa isizathu sifanele. Ukutshintshela umnikelo wokuGcina aBantwana unokukhuphela zonke iincwadi ozifunayo, nangona bacebisa ukuba ubhatale i- € 1 ngencwadi nganye ukunceda abantwana.
Iincwadi zedijithali (ES / EN / FR) Ukuhlanganiswa kwemisebenzi eyenziwe ngu-Ignacio Fernández Galván.
Iifom zohlobo, zeziphi ii-eBooks onokuzivula kumfundi weAmazon?
Ezinye iisayithi zokukhuphela ii-eBooks
Kweli candelo sibona izixhobo ezisinika iincwadana ngezihloko ezithile.
Imyuziyam yeMetropolitan yobugcisa (En) IMyuziyam yaseMetropolitan yoBugcisa eNew York isinika inani elikhulu leempapasho kwifomathi yePDF ejikeleza umhlaba wobugcisa.
IMyuziyam yedijithali (En) Ingqokelela yamahlaya akudala ukusuka kubudala begolide obungaphezulu kwe-15.000 yamahlaya esidlangalaleni e-comics yokukhuphela simahla.
Ilayibrari ekwi-Intanethi yeTekhnoloji yezeMfundo (ES) Kukudityaniswa kweencwadi ezidijithali kunye neemagazini kwiPDF eyenziwe nguNjingalwazi Diego F. Craig, ejikeleze icandelo leTekhnoloji yezeMfundo, nawo onke amaxwebhu akwindawo yoluntu okanye iilayisensi ezivumela ukuba kwabelwane ngazo.
IBoe-Umthetho (ES) Ukuhlanganiswa kwemigaqo ephambili esebenzayo kwinkqubo yezomthetho ihlaziywa rhoqo kwiifd kunye neefom zeepub. Banikwa ngamasebe omthetho.
Iiprojekthi zentengiso ezinee-ebook zasimahla
Ku malunga Iiprojekthi ezijolise kurhwebo ezibonelela ngeencwadi zasimahla. Apha sifumana iinkampani ezinkulu ezinje ngeAmazon, uGoogle okanye indlu yeencwadi, abapapashi abancinci ababonelela ngeencwadi zasimahla kunye nezinye iiwebhusayithi kunye neenjini zokukhangela ezisekwe kwiiprojekthi ezinje ngeGutenberg.
Amazon Kindle (IPHAKATHI) Incwadi enkulu ye-ebook isinika inani elikhulu leencwadi zasimahla kuzo zonke iilwimi.
- Indawo Yoluntu kwiAmazon (IPHAKATHI) Khangela iincwadi zeAmazon ezinelayisensi kwiNdawo yoLuntu.
- Sifter yeNcwadi yasimahla (IPHAKATHI) Injini yokukhangela esekwe kwiincwadi zeAmazon ukwenza ukuba kube lula kuthi ukuzingela ii-ebook zasimahla zohlobo lwethu, kukho iincwadi ngeSpanish nangona ezona zininzi ziincwadi zesiNgesi.
- Amakhulu amaqanda (ES) Enye injini yokukhangela esekwe kwiAmazon. Usibonisa iincwadi ngeSpanish.
- Iincwadi ezisimahla (En) Le projekthi isekwe ekuboneleleni ngeencwadi zasimahla ezivela kwiAmazon, iBarnes kunye neNobles kunye neKobo kwaye sizibonisa zona kwifomathi yebhlog.
Indlu yencwadi (IPHAKATHI) Enye yeevenkile ezinkulu zeencwadi eSpain, ikhathalogu yayo yorhwebo ebanzi ibandakanya imisebenzi yasimahla okanye yexabiso.
Google Books (IPHAKATHI) Isebenza njengesalathiso seencwadi apho sinokufumana khona inani elikhulu leencwadi ezikhoyo zokufunda kwi-Intanethi nangona singazikhupheli.
Play Store (IPHAKATHI) Ivenkile yakwaGoogle ekwi-intanethi, apho sinokufumana khona iincwadi ezininzi zasimahla esinokuzifunda kwi-Smartphone okanye kwiThebhulethi yethu.
Indawo kawonke wonke (ES) Iprojekthi efana nesikhombisi apho banoxanduva lokusasaza kunye nokwenza imisebenzi esele iyindawo yoluntu.
BiblioEteca (ES) Initiative evumela ukuba ukhuphele ii-ebook zasimahla kwaye uhlawule emva kokuba uzifundile izinto ocinga ukuba zilungile, indlela entsha yokwenza imali ngayo. Ifuna ubhaliso.
Incwadi ebonakalayo (ES) Portal apho ababhali bakudala abanemisebenzi kwindawo kawonkewonke bajoyina ababhali abatsha abafaka imisebenzi yabo yokuhambisa.
Abafundi beBQ (ES) Ukukhethwa kweeklasikhi apho inkampani ye-BQ ilayisha khona iincwadi zabafundi bayo. Basishiyela ifayile ye-zip ukuze siyikhuphele.
Ithala leencwadi (IPHAKATHI) Portal enikezela inani elikhulu leencwadi.
Iincwadi zoncedo (ES) Ithala leencwadi elektroniki elisinika ukhetho lwemisebenzi kwindawo kawonkewonke.
Iincwadi ezininzi (En) Iprojekthi etsala kwiprojekthi yeGutenbeberg kunye neGenome kukho iincwadi zomsindo.
eBooksgo (En) Isikhokelo sencwadi esekwe kuGutenberg.
Incwadi yePlanethi(ES) Unika iincwadi zommandla woluntu.
Vula iiNcwadi zasimahla zeNkcubeko (En) Dwelisa ngaphezu kweencwadi ezingama-700 zezixhobo ezahlukeneyo, ii-ereaders, ii-iphones, ii-iphdss, ii-smartphones, njl.
Iinguqulelo zeDyskolo (ES) Inqaku lomhleli apho yonke imisebenzi eliyipapashayo iphantsi kwelayisensi yeCreative Commons
Bubble (ES) Iqonga elikhulu lokushicilela idesktop linenani elikhulu leencwadi zasimahla.
24 Iimpawu (ES) Yiplatifomu yokufunda kwi-Intanethi, ireyithi ethe tyaba yokufunda iincwadi kwi-Intanethi, kodwa isishiyela imiqulu eyahlukeneyo ukuba siyifunde simahla.
Kobo (En) Isigebenga uKobo, sinee-ebook zasimahla kwikhathalogu yayo njengeAmazon.
Barnes & Noble (EN / ES) Owesithathu kukhuphiswano kunye neKobo kunye neAmazon, unemiqulu yasimahla yokukhuphela.
Smashwords (EN / ES) Umhambisi wencwadi yeIndie, ngenani elikhulu leencwadi zasimahla.
Ivenkile yencwadi (En) Iincwadi zedijithali zabafundi abafunda, ii-iphones, ii-smartphones, iitafile, iipads, ipc kunye neMac
Ezemidlalo (ES) Uhlobo lomshicileli osonwabisayo ngeminye yemisebenzi yakhe yasimahla
Lektu (ES) iqonga elikhulu lenkcubeko laseSpain, apho sinokufumana khona ii-ebook, iincwadi ezimanyelwayo kunye neepodcast nokuba ziyahlawulwa na, simahla, ngokukhuphela ngentlawulo yentlalo okanye ngendlela yokubhatala ukuba uyathanda.
Incwadi (ES) Ngaphezulu kwe-10.000 yeencwadi ezifumanekayo ukuze zikhutshelwe. Nangona simahla, kufuneka sibhalise kwiwebhu ukuze sizikhuphele.
Iiprojeki zamaphupha (ES) Lo mvakalisi ugxile kwisincoko ugxila kwishishini lakhe ekuthengiseni iincwadi zamaphepha kodwa usishiya nemisebenzi emininzi phantsi kwelayisensi yeCreative Commons I-CC BY-NC , I-CC BY-NC-SA , I-CC BY-NC-ND )
Iincwadi kwifowuni yam (En) Iincwadi ezihleliweyo ukwenzela ukuba zifundwe kuyo nayiphi na ifowuni okanye isixhobo esifakelwe iJava
Incwadi yeJunkie (En) Iqonga lababhali abatsha nabazimeleyo
Uluhlu lweencwadi (En) Omnye umpapashi wababhali abazimeleyo
IiSayithi zokukhuphela ii-ebook zobugcisa
Iiwebhusayithi ezikhethekileyo ekuboneleleni ngeencwadi zobugcisa nezenzululwazi zasimahla nezisemthethweni.
Vula iLibra (IPHAKATHI) Ilayibrari enkulu ekwi-intanethi yeencwadi zobugcisa. Ngaphandle kwamathandabuzo, iprojekthi enomdla kakhulu eqokelela kwaye isinike inani elikhulu leencwadi zeencwadi zobugcisa nezasimahla. Ilungele ukukhuphela.
Itekhnoloji yeMicrosofot (En) IMicrosofot isishiya netekhnoloji yasimahla kunye neencwadi zesoftware ukuze sizikhuphele kwifomathi ye-pdf okanye sifunde kwi-intanethi.
Iincwadi zeNASA (En) Iincwadi zetekhnoloji ye-NASA ngezihloko zomoya. Inika umdla kakhulu.
Iincwadi ze-CSIC (ES) Inani elikhulu leempapasho zasimahla ezivela kwiBhunga eliPhakamileyo loPhando lwezeNzululwazi. Ichukumisa onke amasebe esayensi.
KwiTekhnoloji (En) Ikhathalogu enomdla kakhulu kwizihloko zetekhnoloji nezenzululwazi ezisebenza ngokuFikelela ngokuVulekileyo.
Iincwadi zeTekhnoloji yasimahla (En) Iincwadi zasimahla zasimahla kunye nezasimahla.
I-O'Really OpenBooks (En) Indlu yokupapasha i-O'Really isishiya neencwadi zayo ezivulekileyo. Azinakukhutshelwa ngaphandle kodwa ungafunda kwi-Intanethi, ezinye izixhobo ezinomdla kakhulu.
Iincwadi zasimahla zeNkqubo (En) Ngokunokwenzeka lolona luhlu lubalaseleyo endikhe ndadibana nalo, ingqokelela ebalaseleyo, enobundlongondlongo, egcinwe isexesheni ngeGithub. Ngeli khonkco lonke amakhonkco obuchwephesha phantse ayeke ukwenza intsingiselo. Ukongeza kwi-Github siyifumana kwi i-reSRC ngohlobo lwewebhu olunobuhlobo ngakumbi
Iincwadi ezikwinkqubo ye-Intanethi (En) Ukudityaniswa kwemisebenzi kwinkqubo, isayensi yekhompyuter, ubunjineli besoftware, uphuhliso lwewebhu, uphuhliso lweapps, iziseko sedatha, iinethiwekhi, njl.
Kwaye oku okwangoku 🙂
Ngelo xesha khange songeze Abapapashi abanikezela ngeencwadi zasimahla kodwa bengazivumeli ukuba zicocwe lula okanye zigqogqwe, kodwa sicinga ngendlela yokongeza kolu luhlu kuba ngokuqinisekileyo baninzi abantu abanomdla.
Ukuba uyazi ezinye iisayithi ezinomxholo wasimahla kunye nezomthetho esingazibandakanyi, nceda Sazise kwaye siya kubongeza kuluhlu lwe amaphepha okukhuphela ii-ebook zasimahla kwi-intanethi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Zonke iiReaders » software » eBooks » Uluhlu lweendawo zokukhuphela simahla iincwadi ngokusemthethweni
Ezona ziReaders zibalaseleyo
Lisebenzise eli thuba kwaye ufumane ezinye ze-eReaders ezilungileyo kwintengiso ngamaxabiso anomdla kakhulu
Uhlobo loPhumeUhlobo lweWebhuwwhiteUhlobo lweOasis
Izimvo ezi-29, shiya ezakho
UBoris Da Silva Pérez sitsho
Enkosi kakhulu, kwaye ndiyavuyisana nawe kwibhlog, ndiyakulandela yonke imihla! Umsebenzi omhle!
Phendula u-Boris Da Silva Pérez
UNacho Morató sitsho
Enkosi kuwe ngokusifunda 🙂 Ndiyabulisa
Phendula Nacho Morató
U-NIEVES PEREZ SAN JUAN sitsho
ENKOSI KAKHULU NGAYO YONKE ISIPHO SAKHO SENGCACISO YENKCUBEKO SIBULELA KAKHULU.
Phendula u-NIEVES PEREZ SAN JUAN
Ndifumene i-imeyile. Nceda undixelele ukuba ndihamba njani xa ndikhangela, ndikhuphela ii-ebok? Enkosi.
Molo u-Enilda, ufumene i-imeyile ebisisaziso kumyalezo wabucala kwiforum yenyathelo elitsha esisalenza kodwa esingakulungelanga. https://www.todoereaders.com/foros/showthread.php?t=794
Kulungile, Nacho, ukuba wabelana ngezi ndawo zenkcubeko.
Ndinebhlog yokukhuphela incwadi (onke amalungelo akhutshiwe), athobeke kakhulu kunalawo uwashicileleyo, ewe. Nantsi ndiyabelana: I-Epub kunye nePDF yasimahla, xa umntu efuna ukusindwendwela 🙂
Enkosi kakhulu ngolu dibaniso lukhulu, ndicinga ukuba, liza kukuthatha ixesha elide ukuqokelela kunye noku-odola.
Molo, enkosi kakhulu ngengcebiso, ndiza kuyiphonononga iprojekthi yakho kwaye ukuba iyahlangabezana neemeko kuhlaziyo olulandelayo loluhlu endiza kulwenza kwiintsuku ezimbalwa ndiza kulongeza.
Ewe, Nacho, enkosi kakhulu! Ndiyathemba ukuba iyahlangabezana neemfuno.
Hector ukuhambelana namanye amagama sitsho
Ngomhla wamashumi amabini anesithathu ku-Epreli ngumhla obaluleke kakhulu kwihlabathi liphela kukhunjulwa "uSuku lweeNcwadi kwiHlabathi liphela" kunye "neLungelo loMbhali", kule khonkco ilandelayo ndikushiyele ingqokelela yeencwadi zokuthengisa ezenziwa nge-Intanethi kwi-Intanethi ngo-23:
Kule khonkco ungabona ukuba ezinye iincwadi ziya kuba simahla kwiAmazon.
Mva kwemini, ndithenge i-bq cervantes e yencwadi, kodwa ndiyaqaphela ukuba phantse zonke ezi ncwadi zenzelwe ukuphehlwa ... andinakho ukuzikhuphela kwi-bq (ndixolele ngokungazi kwam, ndimtsha kule)
Umhlobo olungileyo, ukuba oko kwenzeka kakhulu, kuhlala kuxhokonxa iincwadi.Ukuba uyafuna, ndwendwela eli phepha kwaye uyakufumana iifomathi ezininzi ukongeza ekubeni unamagama angaphezu kwama-30 amawaka. http://www.megaepub.com/
molo kutheni ungazami ukukhuphela i-epub simahla kweli phepha [ihleliwe] ineencwadi kuzo zonke iifomathi!
Molo Milagros. Sithetha kuphela ngeesayithi ezinokukhutshelwa okusemthethweni.
Unjani? Ngaba uyazi naliphi na iqonga apho ungalayisha khona i-epub, kwaye ubabonise njengeshelufu ebonakalayo? Ngamanye amagama, ishelfu ebonakalayo yeencwadi zakho efini. Enkosi!!
Sawubona Darío, ngoku andazi nantoni na, nangona ndiqinisekile ukuba kuya kubakho into. Inketho elungileyo ukufaka ilayibrari yakho kunye nomphathi weCaliber kwibhokisi yedrophu, ikopi, ukuqhuba okanye okufanayo. Ke uhlala uneencwadi zakho kwi-intanethi.
Nacho, enkosi ngempendulo. Kodwa into endiyifunayo ayikokugcina efini kuphela, kodwa kukuba nakho ukubona ngamehlo amaqweqwe kunye namagama elowo, ukuze akwazi ukuzikhetha. Ukuba ingene kwithebhulethi yam ukuya kwilifu, ndiza kubona kuphela amagama eefayile, hayi ezogubungelayo. Kwaye uzikhuphele xa kufanelekile. Ukuba ufumana into, ndixelele! Enkosi!
Molo, ndifuna incwadi «Amangcwaba esiNgesi» ebhalwe nguJM Mediola, ungandixelela ukuba ndingayifumana njani. Enkosi.
Mholweni. Ndiyakumema ukuba udibane no-Ablik ( http://ablik.com). Iincwadi ze-ebook zinokukhutshelwa okanye zifundwe ngokuthe ngqo kwiscreen kunye nasiphi na isixhobo. Yimisebenzi yakudala yoncwadi olungenamalungelo obunini, okanye imisebenzi yoqobo, esemthethweni ngokupheleleyo. Ingapapashwa kwakhona. Konke okugqibelele!
Geez, ndimdala kwaye "ndibamba ibug yezi zinto", ekubeni ndingumqali, ndiya ndisiba (okanye ndiziva ngathi ...) ... "yingcali", kwaye konke enkosi kuwe kwaye amanqaku amaninzi kwi «todoreaders.com»! ENKOSI !
ULucia Garcia sitsho
Umdibaniso ogqwesileyo uNacho! Ngaphandle kweAmazon enokuVakala, zeziphi ezinye iiwebhusayithi ozicebisayo ngokumamela iincwadi ezimanyelwayo?
Phendula uLucía García
Mva kwemini, inqaku elinomdla labathandi bokufunda.
Kubo bonke abo banomdla wokufumana iincwadi ze-Kindle ze- $ 0,00 kwiibhlog, ekushishineni, kwishishini elikwi-intanethi, kuphuhliso lomntu, kwimali engenayo okanye kwezemali, ndinokukunceda.
Ndithenge i-BQ Cervantes 3 eMadrid. Kodwa ndihlala eArgentina kwaye ndizifumana ndimangalisiwe kukuba andinakho ukuthenga iincwadi kwiVenkile okanye enye kwilizwe lam kuba inkqubo ye-NUBICO ayamkeli, umzekelo, amakhadi etyala aseArgentina, into engenzeki namanye amazwe Ihlabathi endithenga kulo.
Ngaba ndinayo enye indlela yokuthenga okanye ngaba ndiyichithile imali?
Ndithenge i-BA Cervantes 3 kuhambo lwam lwakutsha nje eMadrid
Njengoko ivenkile yakwaNubico ingamkeli amakhadi etyala kwilizwe lam, khange ndikwazi ukuthenga naziphi na iincwadi. Kwaye ndithetha ngokuthenga, hayi ukukhuphela ii-ebook zasimahla.
Ngaba umntu unokundixelela ukuba yeyiphi ivenkile okanye umthengisi weencwadi endinokuzithenga eArgentina?
Molo Goodnight. Unokucebisa umntu ofunda i-10. Ndinomdla kule fomathi yokufunda iincwadi zobuchwephesha kwifomathi ye-pdf.Ndinabanye ababini abafundayo (iPapyre kunye neBq Cervantes) kodwa kwezi akukho ndlela yokufunda ii-pdfs. Ngaba i-reader eyi-12 ilungela kwaye ifumaneka lula nini? Konke okugqibelele
Ndikucebisa ukuba ujonge iprojekthi ye-Ebrolis, iwebhusayithi yayo http://www.ebrolis.com
Molo, siyayijonga kwakhona kwaye ukuba iyahlangabezana neemeko siya kuyongeza kuhlaziyo olulandelayo lwesithuba.
Enkosi kakhulu 🙂
Molo ndifuna ukwazi nge «Unbox» ukukhuphela kwangoko iincwadi zedijithali ezinxulumene nezempilo ngokukodwa i-oncology kunye nonyango lwamazinyo, iincwadi ezingafumanekiyo kwilizwe lam ngokuprintwa. Ndifuna izindululo zelo phepha kwiindawo ezininzi zindikhokelela kule.
Luis Diego sitsho
Ndicebisa le 2020 ukuba ikwazi ukukhuphela iincwadi ziyenze kwiincwadifdfgratismundo.xyz baye bahlaziya iincwadi zeencwadi
Phendula uLuis Diego
IAmazon ikuthengela i-eReader yakho yakudala
Incwadi, incwadi enomdla enomdla kwincwadi ye-iPad yethu yomoya
Isilingo sasimahla seAmazon: Iincwadi ezingama-90.000 nangaphezulu